Hogaammiyeyaasha Maamulada Soomaaliya oo kulan ku yeelanaya magaalada Garowe – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaammiyeyaasha Maamulada Soomaaliya oo kulan ku yeelanaya magaalada Garowe
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in todobaadkaan ay magaalada gawore kulan ku yeelan doonaan hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya,sdioo kale waxaa kulankaas ka qayb galaya xubno ka socda beesha caalamka iyo waxgarad Soomaaliyeed ,waxayna dhamaan dhinacyadaan isla eegi doonaan halka uu salka ku hayo khilaafka qaar ka mid ah mamaulada Soomaaliya iyo dowlada dhexe oo hada u muuqda inuu gaaray meeshii ugu xumayd.
Kulankaan ayaa noqon dooni mid ay isku xog waraysan doonayaan madaxda maamulada Soomaaliya sidoo kale waxaa la iskula eegi doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka hirgalay qodobadii ka soo bxayu kulankii ay kal hore ku yeesheen magaalada Kismaanya oo war-murtiyeedkiisa ay ka mid ahayd inay joojiyeen maamuladu wadashaqayntii kala dhexaysay dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Wararka ayaa intaasi ku daraya inuu socdo qorshe la iskugu dhafayo wasiirada maamul goboleedyada wallow aysan hogaamiyeyaasha maamulada Soomaaliya arintaasi xaqiijin.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa qiray in shirka ugu weyn ee maamul goboleedyadu uu ka dhici doono magaalada Garowe ee Xarunta u ah maamulka Puntland wuxuuna sheegay in arimo muhiim ah halkaas looga hadli doono maadaama dowlada dhexe ilaa hada aysan wax war ah oo ku aadan shirkii Kismaanyo ka soo bixin.
Shirkaan lagu wado inuu magaalada Garowe ka furmo arbacada soo aadan ee ay isugu imaanayaa madaxda maamulada Soomaaliya lama oga inuu ka qayb gali doono madaxweynaha maamulka hirshabeele oo isagu horay u shaaciyay in xal laga gaaray wixii dowlada dhexe uu maamulkiisu ka tabanayay sidoo kalena hada ah maamulka kali ah ee wadashaqaynta buuxda ay kala dhexayso dowlada Fedraalka Soomaaliya.
← Madaxweynaha kuuriyada waqooyi oo ogolaaday inuu mar kale la kulmo dhiggiisa Maraykanka
Hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortagaya →